Taliska degmada cabdicasiis oo amar adag kasoosaaray xeebta liido. | Mudug24
Taliska degmada cabdicasiis oo amar adag kasoosaaray xeebta liido.
Ciidamada ammaanka Xeebta Liido ee Degmada Cabdi Casiis, ayaa amar buuxa waxaa lagu siiyay inay gacanta kusoo dhigaan raga iyo dumarka falalka anshaxa aan u wanaagsaneyn ku sameeya Xeebta Liido ee Magaalada Muqdisho oo maalmaha khamiista iyo Jimcaha boqolaal dadweyne ah ay isugu tagaan si ay xeebta ugu damaashaadaan..
Taliyaha Saldhiga Degmada Cabdi Casiis ee Gobolka Banaadir Axmed C/laahi Axmed, ayaa ciidamada qaabilsan ammaanka Xeebta wuxuu ku wargeliyay inay fasax u qabaan soo qabashada cid waliba oo sameynaysa waxyaabaha diinta aysan raali ka aheyn.
Wuxuu sheegay Taliyaha in xitaa ciidamada lagu amray inay kala saaraan dumarka iyo raga hal meel kuwada dabaalanaayo, wuxuuna sheegay in dumarka la rabo in meel gaar ah ay ku dabaashaan, halka ragana sidoo kale meel gaar ah ay ku dabaalanayaan, taasi oo uu sheegay inay hada ka shaqeynayaan sidii ay arintaasi ku sameyn lahaayeen.
“Ma ogolaan doono in Gabar iyo Wiil ay isku meel ku dabaashaan, waan kala saaraynaa Ragga iyo Dumarka, Diinteena ma ogola in Rag iyo Dumar is dhexgalaan, waxaan u sameyn doonaa Ciidan ilaaliya arrintaasi haka waan toobeen Gabdhaha iyo Wiilasha Soomaaliyeed” Ayuu yiri Axmed C/llaahi Taliyaha Saldhiga C/casiis.
Xeebta Liido ee Degmada Cabdi Casiis, ayaa waxaa taga maalinta Jimcaha dad kala duwan oo qaarkood dibada ka yimid, halka dadka qaarna ay Xeebta u tagaan arimo ku aadan sameynta falal anshax xumo ah oo dhowr mar digniino laga soo saaray.
Ciidamo gaar ah oo loo sameeyay Xeebta Degmada Cabdi casiis ayaa gaafwareega halkaasi waxaana tan iyo markii ciidamadaan la sameeyay yaraaday foowdadii iyo handadaadii lagu sameyn jiray hablaha xeebta u dabaaltago.
Waana arin inta badan ay aad usoodhaweeyeen dadka aan arintaan taageersanayn.
Wariye bashiir maxamed faarax xogta.
Previous articleAmin arts oo sawir ku fadeexeeyay wasiir ka tirsan xukuumada oo xiriir la sameeyay al.shabaab…
Next articleKulan lagu taageerayo heshiiskii gaalkacyo oo xalay muqdisho ka dhacay.